साम्रज्ञीले फेरी अर्को हिट फिल्म देलिन् त ? - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
साम्रज्ञीले फेरी अर्को हिट फिल्म देलिन् त ?
फिल्मी फण्डा । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह फिल्मको कारणले मात्र होइन व्यक्तिगत क्रियाकलापको कारणले पनि चर्चामा आउछिन् । हालै उनको करियर र उनीबारे भारतिय सञ्चार माध्यममा पनि चर्चा भएको थियो । साम्राज्ञीको विकिनी तस्वीर र प्रेमीसँगको मस्ति र पारिश्रमिकका कारण चर्चामा रहन्छिन् ।
फिल्म ड्रिम्सबाट रजतपटमा पाइला चालेकी उनले करियरमा हिट र फ्लप दुवै फिल्म दिएकी छिन् । पछिल्ला फिल्महरुबाट उनले निर्माताको गोज भर्न सकेकी छैनन् । उनी अभिनित फिल्म ‘मारुनी’ फ्लोरमा जानु अघि नै भाद्र १३ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरेको थियो । सोही मितिमा दयाहाङ राई अभिनित फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ प्रदर्शनमा आउने तयारीमा थियो । तर, बलिउड फिल्म ‘साहो’को कारण ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ असोज ३ गते पुग्यो ।
अब ‘मारुनी’सँग भिड्ने अर्को नेपाली फिल्म छैन । उसलाई डर छ त बलिउडको फिल्म ‘साहो’को । फिल्मको प्रदर्शन मिति सार्नलाई ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ अगाडी नै भागिसक्यो । प्रभास स्टारर साहोसँग भिड्दै साम्रज्ञीले फेरी अर्को हिट फिल्म देलिन् त ?